warkii.com » Taageerayaasha Real Madrid Oo U Codeeyay Xiddigii Ugu Xumaa Kooxda Iyo Laacibkii Ugu Fiicnaa Xilli Ciyaareedkan
Taageerayaasha Real Madrid Oo U Codeeyay Xiddigii Ugu Xumaa Kooxda Iyo Laacibkii Ugu Fiicnaa Xilli Ciyaareedkan
Real Madrid ayaa mar kale ku guuleysatay koobka horyaalka Spain. Waa koobkoodii ugu horeysay ee tan iyo xilli ciyaareedkii 2016/17, lamana beenin karo in kooxda Zinedine Zidane ay u qalmeen horyaalka.
Barcelona ma aheyn kuwa awood u lahaa inay soo bandhigaan qaab ciyaareed la mid ah kan Real Madrid sannadkan 2020 iyadoo kooxda ka dhisan warkii.com Spain ay badisay 10kii kulan ee ugu danbeeyay ee horyaalka La Liga.
Waxaa jiray xiddigo badan oo qaab ciyaareed fiican oo joogta ah soo bandhigayay xilli ciyaareedkan, laakiin ayay taageerayaasha Real Madrid u codeeyeen?
Xiddiga ugu fiicnaa kooxda xilli ciyaareedkan waxaa loo codeeyay kabtan Sergio Ramos oo ka mid ah daafacyada ugu gooldhalinta badan dunida, wuxuu kooxda ku hogaamiyay guulo badan, wuxuun ahaaa laf dhabarta kooxda.
Waxaa ku soo xiga oo kaalinta labaad soo galay Karim Benzema iyadoo weeraryahanka Faransiiska uu xilli ciyaareedkan wacdarro dhigay isagoo ah xiddiga ugu goolasha badan kooxda, wuxuu sidoo kale kaalinta labaad kaga jiraa tartanka gooldhalinta La Liga isagoo leh 21 gool, wuxuu labo gool ka danbeeyaa Messi oo tartanka hogaaminaya.
Waxaan isna ka dhicin oo kaalinta 3aad soo ciriirsaday goolhaye Thibaut Courtois kaasoo badbaadino badan sameeyay islamarkaana dhibco badan u badbaadiyay Los Blancos xilli ciyaareedkan.
Taageerayaasha ayaa ugu codeeyay Gareth Bale inuu yahay xiddigii ugu xumaa xilli ciyaareedkan isagoo qiimeynta ay ku sameeyay 25ka xiddig ee kooxda koowaad ka soo galay kaalinta ugu danbeysa ee 25.
Waxaa isna liiska xiddigaha ugu xumaa xilli ciyaareedkan ka mid ah James Rodriguez oo aan kulamo badan ciyaarin iyo weeraryahanka fashilmay Luka Jovic.
Codbixinta waxaa taageerayaasha Real Madrid ka qaaday jariirada Marca iyagoo qiimeeyay 25ka xiddig ee kooxda koowaad. Kala sareyntaan waa sida ay tahay waqtiga aan haatan warbixintaan qoreyno: